Alshabaab oo soo Bandhigay siday kula waregeen Degmada bacaadeayn ee Galmudug | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Alshabaab oo soo Bandhigay siday kula waregeen Degmada bacaadeayn ee Galmudug
Kooxda Al-shabaab ayaa soo bandhigtay caddeyn muujineysa qaabka ay ula wareegtay deganka Bacaadweyne ee Konfurta Gobolka Mudug oo ay dhowaan shaaciyeen inay qabsadeen dagaal la’aan.
Waxaa degaankan muddo dheer ku dagaalamayey ciidamada dowladda iyo dadka degaanka oo ka hortaagnaa Alshabaab waxaana la sheegay inay Jimcihii isaga baxeen ciidamadii dowladda, taasoo keentay inay si fudud ula wareegaan Al-Shabaab.
Xarumihii Maamulka Galmudug iyo xeryihii ciidamada Xoogga dalka ee degaanka ayaa waxaa buux dhaafiyey Al-shabaab sida ka muuqata sawirada, iyadoo uusan jirin wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Galmudug iyo talisyada ciidamada dowladda kuna saabsan sababta ay uga baxeen degaankaasi oo muddo dheer laga difaacayey Al-shabaab.
Hadaba Xagee ku danbeyey Howlgalkii La Dagalanka. La.shabab ay Wasaarada Amniga Galmudug Halkaa ka waddey Ee Xoolaha Looga Aruursadey dadka degaanadaas, Hadase maxey Ku nool Yihiin dadka degaanadaas,
Previous articleShir looga Hadlayay Aminiga Gaalkacyo oo ay si wadajir ah uqabteen maamulada puntland iyo Galmudug oo lagu qabtay Gaalkacyo
Next articlekulan looga hadlayay Amniga Galmudug oo lagu qabtay Dhuusamareeb